Visa outage na Europe Isi Gaje Ịbụ nke Cryptocurrency ịkwụ ụgwọ
Ịkwụ Ụgwọ technology nyere eji ọkụ n'ụwa nile na a elu larịị nke na mma. Ọ bụrụ na nke a technology anaghị arụ ọrụ dị ka mara na, dịruru ná njọ ga-nnọọ mfịna. Visa ahụhụ isi outages ofụri Europe maka ukwuu n'ụbọchị on Friday. Nke a underlines mkpa ọzọ ngwọta, tinyere ego na ọbụna cryptocurrency.
The visa ọdịda Europe
Imu na ulo gafee Europe ama enyene isi ugwo isi ike na Friday. Onye ọ bụla na-agbalị ime ka azụmahịa site a Visa ugwo kaadị nwere ike ịbụ na nsogbu. Azụmahịa ndị mmachi ma ọ bụ gaghị ekwe omume iji wuchaa. Financial oru ọbụna gwara-eji ọkụ na-eji ego ma ọ bụ ndị ọzọ n'aka ugwo. MasterCard e adịghị emetụta a nke.
Visa emewo ngwa ngwa kwuru na online azụmahịa ahụhụ obere na nke a. Point-nke-ire azụmahịa nọgidere “see na uche” n'ihi na ọtụtụ nke ụbọchị. The ojiji nke a contactless kaadị nta azụmahịa bụ apụtakarị ọtụtụ mgbe. All a na-egosi otú na-adịghị ike na ego usoro bụ ọrụaka nsogbu.
Ihe dị ka ndị a na-eme ka na-atụghị anya ya pụta. Dị iche iche ATMs na UK ji ha ego mee n'ehihie. Mgbe nsogbu e doziri, ihe ukara okwu E nyeghị. Na mma nke ugwo kaadị na-emetụta ma ọ bụrụ na mgbagwoju akụrụngwa na-akpali ndị a ịkwụ ụgwọ na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. maka Visa, na anya site ikpe ụnyaahụ.
The mkpa cryptocurrency na ego
Ọtụtụ na-eji ọkụ ka nwere ego dị na-aka ndị dị otú ahụ ọnọdụ. Mgbe ndị dị otú ahụ ọdịda bụ nnọọ obere, ha nwere ike ime n'oge ọ bụla. Ọ bụ ya mere nnọọ eleghi anya na ego oriri ga-kpamkpam belata. Ikpe ikpe site na nke ikpeazụ a mishap, na nke ahụ bụ ma eleghị anya ihe kasị mma.
Na mgbakwunye, na visa nke na-egosi na ọzọ n'aka ugwo na-mkpa. N'adịghị ka na-akwụ kaadị na ego, cryptocurrencies nwere ike ịzọpụta ụbọchị n'oge dị ka ndị a. N'agbanyeghị na ha na volatility, ọtụtụ ugwo processors adị aka cryptocurrency azụmahịa n'agbanyeghị nwa oge price fluctuations.
Imu na ulo mkpa ntị ka ndị a uzo ozo. Ọ bụ ezigbo ụzọ na-a otu ebe ọkọnọ nke ego na aka, ma ọ ka na-achọ a kwesịrị ekwesị ugwo kaadị ịdọrọ site na igwe ndọrọ ego. Cryptocurrencies bụ otu nhọrọ, ọ bụ ezie na taa na ha na-anabata naanị mmadụ ole na ole Jeriko. Ụdị nsogbu ahụ nwere ike ịgbanwe mee elu mee kama ka e mesịrị.
Kraken Daily Market Report maka 02.06.2018
$131M ahịa gafee ahịa niile taa
Huobi kaadị mgbanwe ezube Brazil mgbasa
Huobi, a isi cryptocurrency mgbanwe sitere China, na-mwube ụlọ ahịa na Brazil.
A nnọchiteanya si Huobi Group ka nkwenye na ụlọ ọrụ si n'obi ịbanye Brazil ahịa.
The mgbalị n'egosi nzọụkwụ ọzọ na Huobi atụmatụ maka zuru ụwa ọnụ mgbasa.
N'oge gara aga afọ, IC ...
Sec achọ comments f ...
Next Post:Ethereum obere akpa ImToken nwere $ 35B na ego, karịrị 99% nke US mmiri